တရုတ်ကုမ္ပဏီသတင်းများစက်ရုံ - စျေးပေါတဲ့ကုမ္ပဏီသတင်းများပေးသွင်း, Export
အချိန် post: 02-01-2018
အချိန် post: 01-10-2018
အချိန် post: 12-27-2017
အချိန် post: 12-11-2017
အချိန် post: 11-29-2017
အချိန် post: 10-12-2017
အချိန် post: 09-12-2017
အချိန် post: 08-29-2017
အချိန် post: 08-15-2017
Koowheel 8.5inch ဟာ Off-လမ်းမကြီး K7 သငျသညျ သာ. ကောင်း၏အတွေ့အကြုံကိုဆောင်တတ်၏
အချိန် post: 08-01-2017
အဆိုပါ KOOWHEEL 8.5inch စမတ်ချိန်ခွင်လျှာ Scooter K7 စျေးကွက်အပေါ်နောက်ဆုံးပေါ် hoverboard တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအခြားအ hoverboards, ကပိုပြီးအစွမ်းထက်မော်တာသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြု, အ 8.5inch ဘီးသော်လည်း, ဖုန်နှင့်မြက်ခင်းပြင်ပေါ်တွင်စိတ်ကူးရှိပါတယ်ထက်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းပညာကိုတပ်ဆင်ထားငွေဖြစ်ခြင်းမဟုတ်, သင် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Koowheel K8-သင့်ရဲ့ Hoverboard ၏ရွေးချယ်မှု
အချိန် post: 07-21-2017
Koowheel launched it’s latest hoverboard Koowheel K8—Your choice of Hoverboard •The sooner you choose K8, the more money you will make; •As smart balance wheel hoveboard K8 will become the new hot-sell item. What is going on with the Hoverboard Market? •The Chic version has been on the Market f...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 07-18-2017
ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ Weekend အချိန်သို့မဟုတ် LeisureTime ဖြုန်းသလဲ? မကြာသေးမီနှစ်များတွင်လူငယ်များလိုက်စားဖက်ရှင်နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့နိုင်ရန်အတွက်တစ်စမတ်ချိန်ခွင်လျှာ Scooter စီး ပို. ပင်ယနေ့လူကြိုက်များတဲ့ဖြစ်လာနေသည်။ ဒါဟာလှုပ်ရှားမှု၏အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်လာသည်။ ဒါကအားလုံးသက်သာနှင့် reliabil မှစွပ်စွဲတာဖြစ်ပါတယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Koowheel မိမိကိုယ်ကို balancing ဘုတ်အဖွဲ့ K4 သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
အချိန် post: 07-12-2017
"တစ်ဦးက: စာနယ်ဇင်းပု, ဘုတ်အဖွဲ့တွင်ဖွင့်" ။ ။ "on / off ပါဝါ" "button ကို; အဆိုပါဘုတ်အဖွဲ့ဟာအသံဆူဆူညံညံအသံကနားကြားတဲ့အခါမှာပေါ်သည်နှင့် LED ကိုညွှန်ပြချက်အလင်းပေါ်မှာဘုတ်အဖွဲ့အပေါ် 2. အဆင့်နှင့်မှန်သောချိန်ခွင်ကိုစောင့်ရှောက်ပထမဦးစွာတဦးတည်းခြေလျင်ထား ခြေ pad ပါအပေါ်ထို့နောက်တဖြည်းဖြည်းခြေ pad ပါအပေါ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာရုံရွှေ့နှင့် th ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 06-22-2017
ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများမှာ hoverboard ဆိုင်ကယ်သို့မဟုတ်စကိတ်စီး Scooter ကအရမ်းပေါ်ပြူလာဖြစ်ပါတယ်, ကလေးတွေအနေနဲ့အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာစကိတ်စီး Scooter ကစားခြင်းကိုစတင်ပါ။ Koowheel နည်းပညာကုမ္ပဏီတိုတိုအတှကျအသုံးပွု dual-မော်တာနှင့်အတူလေးဘီးလျှပ်စစ်စကိတ်စီး၏သမိုင်းမိတ်ဆက် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
နှစ်ခုဘီးစမတ် Scooter k3 ၏ feauture
အချိန် post: 06-13-2017
နှစ်ဦးကဘီးလျှပ်စစ်စကူတာကြောင့်မကြုံစဖူးအသစ်သောမော်တော်ယာဉ်သည်, တစ်ဦးမြို့ပြမော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်ကိုသုံးစွဲဖို့တစ်ဦးချင်းစီ၏လျှပ်စစ်, Self-ဟန်ချက်ညီစွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ကင်းလှည့်အလုပ်, မိုးလုံလေလုံအားကစားကွင်း, ဂေါက်သီးလှည်း, ရဲကင်းလှည့်, ကင်းလှည့် exhibitio အဘို့, မောက်စ်တင်ဘုတ်အဖွဲ့အဖြစ်လူသိများ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ကိုယ်ပိုင်ဟန်ချက်ညီ Scooter K5 အကျဉ်းမိတ်ဆက်
အချိန် post: 05-27-2017
ကုန်ပစ္စည်းဖျေါပွခကျြအ Self-ဟန်ချက်ညီ Scooter သုံးကဏ္ဍများရှိပါတယ်။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုပုဆိန်ဟာ Scooter ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏လက်ဝဲနှင့်လက်ယာနှစ်ဖက်ကိုထိန်းချုပ်; နှစ်ဖက်ရွေ့လျားနေချိန်တွင်လွတ်လပ်စွာလည်ပတ်နိုင်ပြီး, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်မဟုတ်။ အဆိုပါ Scooter နှစ်ခုဘီးရှိပါတယ်; ဘီးအကြား width ကိုမ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
KOOWHEEL နယူးဒီဇိုင်းလျှပ်စစ် Scooter L8
အချိန် post: 05-08-2017
စကိတ်စီးခြင်းရန် Koowheel မူပိုင်ခွင့်ဆန်းသစ်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းလျှပ်စစ် Scooter L8 မရှိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဤလောကတှငျဖြစ်ကြပြီးသင်သာသင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကကန့်သတ်ထားပါသည်အခမဲ့ဖြစ်ရမည်။ Koowheel သငျသညျအလိုရှိကြသည်တွင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုငျသညျကိုယူနိုငျသညျ, အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့အမှတ်တံဆိပ်ဤအရပ်ပု, ဒီအယူအဆ embody သင့်တယ်ထင်ပါတယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 04-28-2017
Appearance, the appearance of them are different, but basically rely on the balance of people to achieve, about the balance ability need foracertain learning process, no one will be good at riding these since they are born . Electric scooter compared with the latter two, it is easier t...ဆက်ဖတ်ရန် »
Koowheel နယူးစမတ် Scooter K5 intrduction ဟန်ချက်ညီ
အချိန် post: 04-12-2017
Koowheel နယူးလျှပ်စစ်မိမိကိုယ်ကိုဟန်ချက်ညီ Scooter K5 လာမယ့်နေပါသည်! ဒါဟာပုံမှန်နှစ်ခုဘီးစမတ် Scooter နဲ့အတူအများကြီးကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ အဆိုပါတိုးတက်မှုကလူပိုကောင်းစီးနင်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားပျော်မွေ့အောင်ဒီတော့ဒီ hoverboard အကြောင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ R & D ရေးအဖွဲ့, အတွေ့အကြုံစီးနင်းအပေါ်အများကြီးအချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်။ သုံးပိုင်းအဆောက်အဦများ။ Kee ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 03-29-2017
Package Includes: Electric skateboard with battery*1 User Manual*1 Charger*1 How To Ride the Skateboard? Turn on the Remote first and turn on the board to connect, Stand like this, little forward, slowly push the button, here we go! If you want to enjoy the highest speed, you can press7...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 03-16-2017
balance ကားတစ်စီးကိုသင်အရှိဆုံးအဆင်ပြေနွေရာသီခရီးသွား mode ကိုအဓိကအစွန်အဖျားပေးသည်: မြင့်မားသောအပူချိန်သည်းမခံနိုင်သောပူပြင်းတဲ့နွေရာသီအတွက်ခရီးသွားတစ်ဦးညှဉျးဆဲဖြစ်လာသည်။ Koowheel ချိန်ခွင်လျှာကားတစ်စီးတစ်ဦးအေးမြနွေရာသီကိုသင်နွေရာသီတွင်သွားလာရန်အရှိဆုံးအဆင်ပြေပေးသောနည်းလမ်း! နွေရာသီ, ခရီးသွားလာဆငျးရဲဒုက်ခတစ်နေသာနေ့၌ t ကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်လာခဲ့ပါသည် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အားလုံးသင့်ရဲ့စီးနင်းလိုအပ်ချက်များကို-Koowheel Balance Scooter တွေ့ဆုံရန်
အချိန် post: 03-14-2017
စီးနင်းပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စီးခရီးစဉ်အပေါ်ပိုမိုအဆင်ပြေသည် Koowheel ဟန်ချက်ညီ Scooter ကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်, သင်ကစတင်ရန်လိုသလား? မွို့၌ပျော်မွေ့စီးနင်းတွေ့ကြုံခံစားလိုပါသလား? ရုံသင်တစ်ဦး KOOWHEEL ချိန်ခွင်လျှာကားတစ်စီးပေး, သင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်မြင့် str စိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲအချိန်ကြာမြင့်စွာစီးမှတဆင့်လမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
KOOWHEEL E-စကိတ်စီး, သင့်ဘဝကို Cool ဖြစ် Make
အချိန် post: 03-01-2017
Have you ever thought aboutaromantic and beautiful weekend with your lover? Do you want to show yourself in the public? And would you like to let your body and mind to be fully relaxed onasunny day, feel likeapoetic and moving melodies, and listen to the voice of nature, permeated the wh...ဆက်ဖတ်ရန် »
သငျသညျခရီးသွားလုပ်ငန်း-Balance စကူတာတစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ် tool ကိုရတယ်ရှိပါသလား?
အချိန် post: 02-22-2017
ဆောငျးရာသီသွားပြီဆိုပါကနွေဦး outing ရန်သင့်အားယူမှကားတစ်စီးဟန်ချက်ညီနှစ်ဦးကိုဘီးတပ်ယာဉ်, ဖြစ်ဝေးပေါက်နိုင်သလဲ နွေဦးမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ဦးနွေဦး outing အဘို့အပယ်သွားနေဖို့လိုကြသည်။ ရိုင်းပန်းပွင့်နွေဦးပွင်လူရောင်စုံတွေနဲ့မွှေးပန်းပွင့်ကိုမြင်သောအခါ, သဘာဝကျကျကြည့် ယူ. , ရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလေ့လာမှုပြုလုပ် t ကိုတွေ့ရှိရ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 01-17-2017
Remote lights tips: 1.Charge indicator will be on when charging 2.Battery light and Direction indicator on means it’s connected 3.BLUE means battery is high RED means battery low 4.Direction indicator turn RED when reversed Get Ready 1. Install the battery correctly, and twist screws 2...ဆက်ဖတ်ရန် »
KOOWHEEL သငျသညျ, E-Scooter ဒါမှမဟုတ် E-စကိတ်စီးစီးနင်းအပေါ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံကိုပေး
အချိန် post: 01-09-2017
အဆိုပါစီးနင်းရိုးရာမော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်လျှပ်စစ်စက်ဘီးနှင့်အတူနောက်ပိုင်းတွင်ဤအမြိုးအစားနင်းလွှမ်းမိုးကျော်ကမရှိ, ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အမျှအရှိန်လည်းမရှိပေမယ့်ညစ်ညမ်းမှုပြဿနာကိုဆန့်ကျင်တဲ့အလယ်ဗဟိုဖြစ်လာသည်။ KOOWHEEL နှစ်ခုဘီးဘုတ်အဖွဲ့ K1 နှင့်လေးဘီးလျှပ်စစ်စကိတ်စီး hov ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 01-04-2017
အသက်တာ၏ခေတ်မီအစာရှောင်ခြင်းများတွင်အဖြူကော်လာ၏အများဆုံးအဘို့, ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများတနင်္ဂနွေမှာအကောင်းတစ်ဦးအပျြောအပါးပါပဲ။ ဤတွင်မေးခွန်းတစ်ခုလာ: ဘယ်လိုသူတို့ကသဘောတူညီခဲ့ရာအရပျမှရနိုင်မလဲ? KOOWHEEL လျှပ်စစ်စကိတ်စီးသောသူတို့အားဖက်ရှင်ငယ်ရွယ်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာသူတို့ hav မကိုဆိုလိုသည်ဖြစ်ပါတယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အဆိုပါစမတ်ချိန်ခွင်လျှာ Scooter ခရစ်စမတ်မှာသင်နှင့်အတူအဖော်လိုက်ကြပါစို့။
အချိန် post: 12-08-2016
ကြောင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရဲ့ခရစ္စမတ်နီးပါး, တရုတ်နွေဦးပွဲတော်မှအကျွမ်းတဝင်ခရစ်စမတ်, ဒီနေ့၌, လူတွေအများစုကသူတို့လိုလုပ်ဖို့ဘာလုပ်နှင့်တစ်ဦးအလွန်တတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာသူတို့ရဲ့အများဆုံးအကြိုက်ဆုံးလက်ဆောင်တွေကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ သငျသညျကွိုးစားပါကမစောင့်နိုင်သလဲ ခေတ်သစ်အသက်တာ၏အစာရှောင်ခြင်းအရှိန်အဟုန်များတွင်အများဆုံးအဖြူရောင်-ကော်လာသွားပြီးဌ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အဆိုပါစကိတ်စီးစီးနေစဉ်တွင်အဘယ်ကြောင့်တခါတရံဝေးလံသော controller ကိုအမိန့်ထဲကပါသလဲ
အချိန် post: 11-28-2016
လမ်းလျှောက်တစ်ခုသို့မဟုတ်စီးနင်းစဉ်ခေတ်သစ်အသက်တာ၏အစာရှောင်ခြင်းအရှိန်အဟုန်များတွင်အဖြူ-ကော်လာ၏အများဆုံးတစ်ဦးပျော်ရွှင်စိတ်ဓါတ်များနှင့်အတူနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသွားပြီးအလုပ်စွန့်ခွာချင်, အတိုးပွားလာအသွားအလာယိုအခွအေနေအောက်မှာ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စ, အဆင်မပြေဖြစ်လိမ့်မည် အချိန်စက်ဘီးစွန့်ပစ်မယ့်, သင်ထားတဲ့စမတ် scoot လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
လျှပ်စစ်မိမိကိုယ်ကို balancing Scooter ရဲ့ဖက်ရှင်ကျက်သရေတွန်းလှန်ဖြစ်ပါသည်
အချိန် post: 11-16-2016
လျှပ်စစ်မိမိကိုယ်ကိုဟန်ချက်ညီ Scooter koowheel, လူတွေအမြဲအသစ်သောအရာများအတွက်အရမ်းစပ်စုဖြစ်ကြသည်ထို့ကြောင့်သစ်ကိုစီးနင်း device ကိုဝယ်ခြင်းငှါယှဉ်ပြိုင်စားသုံးသူများကျယ်ပြန့်အရေအတွက်ကဆွဲဆောင်, လူတွေရဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ Koowheel ကိုယ်ပိုင်ထပ်ဆင့်တင်ခြင်းစမတ်စကူတာအခုဆိုရင်အတွက်အတွက်စီးနင်းကြယ်ပွင့်ဖြစ်လာသည် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Koowheel နှစ်ပေါင်းများစွာထိပ်တန်းတစ်ဆယ်စမတ် Scooter အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် rated ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မည်မျှကျော်ကြား hoverboard Scooter အမှတ်တံဆိပ်ရှိပါတယ်? သင်၏ Google browser ကိုဖွင့်လှစ်, အဲဒီနောက်သော့ချက်စာလုံးများ "ချိန်ခွင်လျှာ Scooter ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း" ကိုရှာပေးပါ, ပထမဦးဆုံးစာမျက်နှာပေါ်တွင် www.koowheel.com domain name ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဆယ်အတွက် -...ဆက်ဖတ်ရန် »
စိတ်ကူးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါတယ်ဘယျအခြိနျ, ကောင်းသော, သို့သော်အကောင်အထည်ဖော်မရနိုငျပေမဲ့အဆိုပါကစားသမားတစ်ဦးသဟဇာတအသွားအလာဖန်တီးခေတ်သစ်အသွားအလာပြဿနာများအတွက်ဆန်းသစ်နှင့်လက်တွေ့ဖြေရှင်းချက်ပေးရန်, ဆန်းသစ်တဲ့နည်းပညာများနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်၏နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်နေဆဲမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခါအသွားအလာပြဿနာနိုင် ...ဆက်ဖတ်ရန် »